Profile | Safidy USA
0 fifandraisana0 manaraka 0 mpanara-dia
Miaraka amin'ny fikarohana sy ny fampielezan-kevitra manohitra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay niaviany tany Switzerland.
Manjary mavitrika ny maso-maso izay mampandoa ny zon'olombelona sy ny politika ny zon'olombelona. Miaraka amin'ny fikarohana be herim-po, ny fanadihadihana fatratra sy ny fanentanana matanjaka dia miara-miasa amin'ireo mpikambana 25'000 ho an'ny Soisa izay miasa am-pahombiazana manerantany isika. Satria manomboka amintsika ny fahamarinana eran-tany.
Mpikambana 😉 Miray hina isika!
Ity mpampiasa ity dia tsy namoaka lahatsoratra
#3 Marina Ivkić Point 289,4
#4 Kindernothilfe Point 288,0
#21 Anita Ericson Point 48,0